ခါချဉ်ေကာင်မာန်မြကီး ေတာင်ြကီးမြဖိုေတာ့ပါ | ြမန်မာစာ ြမန်မာစကား
at Friday, May 28, 2010 –7မှတ်ချက်ေလးေတွ
“ဆရာမ.... ဆရာမ.... “​ေမာ်” ဆိုတဲ့​ စာလံုး​မှာပါတဲ့​ (​ေရး​ချ​ေရှ့​ထိုး​) က ဒီလိုမျိုး​ -ာ်၊​ “​ေပါ်” ဆိုတဲ့​စာလံုး​မှာပါတဲ့​ (​ေရး​ချ​ေရှ့​ထိုး​) က ဒီလိုမျိုး​ -ါ် .... (​ေရး​ချ​ေရှ့​ထိုး​)ချင်း​ အတူတူ ဘာလို့​ပံုစံနှစ်မျိုး​ြဖစ်​ေနတာလဲဟင်....။”
ဒါက​ေတာ့​ တနဂင်္​ေနွ​ေန့​ေတွတိုင်း​မှာ လုပ်အား​ေပး​ အ​ေနနဲ့​ ြမန်မာစာ သင်ပုန်း​ြကီး​ဖတ်စာ သွား​သင်​ေပး​ေနတဲ့​ ဘုန်း​ြကီး​ေကျာင်း​က ကျွန်မရဲ့​ တပည့်​ေလး​တစ်​ေယာက်က ကျွန်မကို ​ေမး​လိုက်တဲ့​ ​ေမး​ခွန်း​ေလး​ပါ။ ကျွန်မအ​ေနနဲ့​ ြပန်လည်​ေြဖဆိုဖို့​ရာ အ​ေတာ်ကို ​ေဘး​ကျပ်နံကျပ် ြဖစ််ခဲ့​တဲ့​ ​ေမး​ခွန်း​ဆိုလည်း​ မမှား​ဘူး​ေပါ့​။
အခုဒီဘုန်း​ြကီး​ေကျာင်း​က က​ေလး​ေတွထဲမှာဆိုရင် အ​ေဖ၊​ အ​ေမက ြမန်မာ​ေတွ ြဖစ်​ေသာ်ြငား​လည်း​ အ​ေြခအ​ေနအရ ဒီနိုင်ငံမှာ ​ေမွး​ဖွား​ြကီး​ြပင်း​လာခဲ့​ရြပီး​ ြမန်မာစာကို ​ေကာင်း​စွာသင်ယူခွင့်​မရတဲ့​ က​ေလး​ေတွ၊​ ြမန်မာြပည်မှာ ​ေမွး​ဖွား​ခဲ့​ေပမယ့်​လည်း​ မိဘ​ေတွရဲ့​ အလုပ်အကိုင် အ​ေြခအ​ေန​ေတွအရ ဒီနိုင်ငံကို ​ေြပာင်း​ေရွှ့​ ြကီး​ြပင်း​လာခဲ့​ရြပီး​ ြမန်မာစာကို ​ေမ့​သွား​ြကတဲ့​ က​ေလး​ေတွ စသည်ြဖင့်​ေပါ့​ေလ အမျိုး​မျိုး​ ရှိြကပါတယ်။
ကျွန်မ အဲဒီဘုန်း​ြကီး​ေကျာင်း​က စာသင်ခန်း​ေလး​ကို ပထမဆံုး​အ​ေနနဲ့​ စ​ေရာက်သွား​တဲ့​ေန့​မှာပဲ သတိထား​လိုက်မိတာတစ်ခုက တစ်ချို့​က​ေလး​ေတွဟာ Singlish ကို​ေတာ့​ မွှတ်​ေန​ေအာင် ​ေြပာတတ်ြကြပီး​ ြမန်မာစာ၊​ ြမန်မာစကား​ကို အဆင်​ေြပ​ေြပ၊​ အချိုး​ကျကျ ​ေြပာတတ်ဖို့​ရာကျ​ေတာ့​ မနည်း​ကို အား​ယူ​ေြပာဆို​ေနြကရတာကိုပါပဲ။
အဲဒီမှာတင်ပဲ ကျွန်မစိတ်ထဲမှာ သူတို့​ေလး​ေတွကို ြမန်မာစာနဲ့​ ​ေရး​ထား​တဲ့​ စာ​ေပ​ေတွကို ကျွမ်း​ကျွမ်း​ကျင်ကျင် သိ​ေစချင်၊​ ဖတ်တတ်​ေစချင်တဲ့​စိတ်​ေတွ တဖွား​ဖွား​ြဖစ်​ေပါ်လာမိပါတယ်။ အ​ေြခအ​ေန​ေတွက ဘယ်လို​ေတွပဲ ြဖစ်​ေနြဖစ်​ေန​ေပါ့​ေနာ်။ ြမန်မာက​ေလး​ငယ်​ေလး​ေတွကို ြမန်မာြပည်အ​ေြကာင်း​ကို သိ​ေစချင်တယ်။ ြမန်မာ့​ဓ​ေလ့​ထံုး​စံ​ေတွကို နား​လည်​ေစချင်တယ်။ ြမန်မာ့​ေြမ ြမန်မာ့​ေရကို ချစ်တတ်​ေစချင်လာတယ်။
ဒါ့​အြပင် ကျွန်မဆက်​ေတွး​မိတာ​ေတွက ဒီက​ေလး​ေလး​ေတွ စိတ်ဝင်စား​ေနြကတဲ့​ စာအုပ်စာ​ေပ၊​ ကာတွန်း​ဇာတ်​ေကာင်​ေတွ အ​ေြကာင်း​။ အခုဆိုရင် သူတို့​အ​ေနနဲ့​ ​ေကာင်း​ေကာင်း​သိတာက စပိုက်ဒါမန်း​ (Spiderman)၊​ ဘက်တ်မန်း​ (Batman)၊​ တွမ်နဲ့​ ဂျယ်ရီ (Tom & Jerry)၊​ တွိတီ (Tweety)၊​ ဂါး​ဖီး​လ်(Garfield)၊​ ဖန်တန် (The Phantom)၊​ Donald Duck စသည် စသည်တို့​ေပါ့​ေလ။ ကျွန်မက သူ့​တို့​ကို သူတို့​အခုသိ​ေနတဲ့​ ဇာတ်​ေကာင်​ေတွတင်မကဘူး​၊​ သိပ်ချစ်စရာ​ေကာင်း​တဲ့​ ြမန်မာ့​က​ေလး​ကာတွန်း​ ဇာတ်​ေကာင်​ေလး​ေတွရှိတယ် ဆိုတဲ့​အ​ေြကာင်း​ကိုပါ သိ​ေစချင်တာ။
ကျွန်မတို့​ ငယ်ငယ်တုန်း​က အရမ်း​ကို နှစ်သက်စွဲလမ်း​ခဲ့​တဲ့​ ​ေရွှ​ေသွး​၊​ မိုး​ေသာက်ပန်း​၊​ ​ေတဇ အစရှိတဲ့​ က​ေလး​ဂျာနယ် စာ​ေစာင်​ေတွထဲက ကျွန်မ အခုထိမ​ေမ့​ေသး​တဲ့​ ကာတွန်း​ ဇာတ်လိုက်​ေလး​ေတွြဖစ်တဲ့​ နံုအအ ထံု​ေပ​ေပနိုင်လွန်း​တဲ့​ “​ေကျာ်ထွဏ်း​”ရဲ့​ ဝတုတ်တုတ် ဇာတ်လိုက် “​ေမာင်ရိုး​”နဲ့​ “စမ်း​ေချာင်း​ကိုကို​ေအာင်”ရဲ့​ ပိန်​ေညာင်​ေညာင် ဇာတ်လိုက် “​ေမာင်န”တို့​၊​ “သူရ”ရဲ့​ “ဘယ်​ေကျာ်”နဲ့​ “မင်း​ေဇာ်”ရဲ့​ လျှာထိုး​ဦး​ထုပ်​ေလး​ ​ေဆာင်း​ထား​တဲ့​ “ဘိုဘို”တို့​၊​ “​ေြမဇာ”ရဲ့​ ​ေခါင်း​ေပါ်မှာ ဆံပင်​ေမွှး​ေလး​ တစ်ပင်တည်း​ ​ေထာင်​ေနတဲ့​ “စိန်​ေမျာက်​ေမျာက်”၊​ အြမဲတမ်း​ စွပ်ကျယ်အကင်္ျီကို ပုခံုး​တစ်ဖက်ကျ​ေအာင် ဝတ်ထား​တတ်ြကြပီး​ မျက်မှန် ​ေလး​ေထာင့်​ထူထူြကီး​ေတွကို တပ်ထား​ြကတဲ့​ “တင်​ေအာင်နီ”ရဲ့​ “ြပာဂ​ေလာင်နဲ့​ ြပာလ​ေချာင်”ညီအစ်ကိုတို့​၊​ “​ေဆွမင်း​(ဓနုြဖူ)”ရဲ့​ “တွတ်ပီနဲ့​ဗိုက်က​ေလး​”တို့​ အဲဒီဇာတ်​ေကာင်​ေတွကို​ေရာ သူတို့​ေလး​ေတွနဲ့​ ရင်း​နှီး​ေစချင်လိုက်တာ။
ဒါတင်မဟုတ်​ေသး​ပါဘူး​။ ဒီလိုနဲ့​ သူတို့​ေလး​ေတွ တစတစ ြကီး​ြပင်း​လာြပီဆိုရင်​ေရာ။ ြမန်မာ့​သမိုင်း​ဆိုတာကို​ေရာ သူတို့​ စိတ်ဝင်တစား​ရှိပါ့​လား​။ ြမန်မာနိုင်ငံ​ေတာ်ြကီး​ကို ဘယ်သူ​ေတွက ဘယ်လို ​ေသွး​ေတွ ​ေချွး​ေတွနဲ့​ တည်​ေထာင်ခဲ့​ရသလဲ ဆိုတာမျိုး​ကို​ေပါ့​။ ပထမြမန်မာနိုင်ငံ​ေတာ်ြကီး​ကို စတင်တည်​ေထာင်ခဲ့​သူ “အ​ေနာ်ရထာမင်း​တရား​ြကီး​”၊​ ဒုတိယနိုင်ငံ​ေတာ်ကို တည်​ေထာင်သူ “ဘုရင့်​ေနာင်”၊​ တတိယနိုင်ငံကို တည်​ေထာင်သူ “အ​ေလာင်း​မင်း​တရား​ြကီး​ ဦး​ေအာင်​ေဇယျ” စသူတို့​အြပင် ​ေနာက်ဆံုး​ ကျွန်မတို့​ တိုင်း​ြပည််အတွက် အသက်စွန့်​သွား​ခဲ့​တဲ့​ ကျွန်မတို့​ သိပ်ကို ြကည်ညို​ေလး​စား​ရတဲ့​ အာဇာနည် ​ေခါင်း​ေဆာင်ြကီး​ “ဗိုလ်ချုပ်​ေအာင်ဆန်း​”။ ဒီသူ​ေတွအ​ေြကာင်း​ကို သိဖို့​ေန​ေနသာသာ ဒီနာမည်​ေတွကို သူတို့​ ြကား​ေတာင်မှ ြကား​ဖူး​ြကရဲ့​လား​။ သူတို့​ရဲ့​ မိဘ​ေတွက​ေရာ က​ေလး​ေတွကို ြမန်မာ့​သမိုင်း​ေြကာင်း​ေတွကို တခုတ်တရ ​ေြပာြပြကဖို့​ သတိရပါ့​မလား​။
သမိုင်း​ဆိုတာက အလှမ်း​ေဝး​ပါ​ေသး​တယ်​ေလ။ စာ​ေပ​ေတွနဲ့​ ပတ်သက်လို့​ စဉ်း​စား​ြကည့်​ရင်​ေရာ။ သူတို့​ေလး​ေတွ အ​ေနနဲ့​ ကဗျာ၊​ ြပဇာတ်၊​ ဝတ္ထုဇာတ်လမ်း​စတဲ့​ အြပင်စာ​ေပ​ေတွကို ဖတ်ရှုတတ်လာြကြပီဆိုရင် ရာဘင်တရာ နတ်တဂိုး​ (Rabindranath Tagore)၊​ ရှိတ်စပီး​ယား​ (Shakespeare)၊​ မတ်တွိန်း​ (Mark Twain)၊​ ​ေအာ်စကာဝိုင်း​ (Oscar Wilde)၊​ လီယို​ေတာ်စတွိုင်း​ (Leo Tolstoy)၊​ ဗာဂျီး​နီး​ယား​ဝုဖ် (Virginia Woolf)၊​ ဂျွန်ရပ်စကင်း​ (John Ruskin) စတဲ့​ ကမ္ဘာ​ေကျာ် စာ​ေရး​ဆရာ၊​ ဆရာမြကီး​ေတွရဲ့​ စာ​ေတွ၊​ ကဗျာ​ေတွကိုပဲ ဖတ်ြက​ေတာ့​မှာလား​။ အဲဒီစာ​ေရး​ဆရာြကီး​ေတွရဲ့​ အ​ေြကာင်း​ေတွကိုပဲ စိတ်ဝင်တစား​ ​ေလ့​လာြကမှာလား​။
ကျွန်မတို့​ ြမန်မာြပည်မှာ ဟိုး​ေရှး​မဆွကတည်း​က ​ေပါ်​ေပါက်ခဲ့​ြကတဲ့​ “ရှင်မဟာရဋ္ဌသာရ”၊​ “ရှင်မဟာသီလဝံသ”၊​ “ရှင်ဥတ္တမ​ေကျာ်”၊​ “စ​ေလဦး​ပုည” စသူတို့​လို ကဝိအ​ေကျာ်အ​ေမာ်​ေတွရဲ့​ စာ​ေပ​ေတွက စလို့​ “ဆရာြကီး​သခင်ကိ်ုယ်​ေတာ်မှိုင်း​”ရဲ့​ ​ေဒွး​ချိုး​၊​ ​ေလး​ချိုး​ြကီး​ေတွအပါအဝင်၊​ ​ေခတ်စမ်း​စာ​ေပမှာ အဦး​ဆံုး​လို့​ ​ေြပာလို့​ရတဲ့​ “သိပ္ပံ​ေမာင်ဝ”ရဲ့​ စာ​ေပ​ေတွအြပင် ​ေနာက်ပိုင်း​မှာ ဆက်တိုက်ဆိုသလို ထူး​ချွန်​ေြပာင်​ေြမာက်တဲ့​ စာ​ေရး​ဆရာြကီး​များ​ြဖစ်တဲ့​ “ြမသန်း​တင့်​”၊​ “ဒဂုန်​ေရွှမျှား​”၊​ “​ေရွှဥ​ေဒါင်း​”၊​ “ချစ်ဦး​ညို”၊​ “တက္ကသိုလ်ဘုန်း​နိုင်”၊​ စာ​ေရး​ဆရာမ​ေတွထဲက ဆိုရင်လည်း​ “ဂျာနယ်​ေကျာ်မမ​ေလး​”၊​ “ခင်နှင်း​ယု”၊​ “ခင်​ေဆွဦး​”၊​ “ြကည်​ေအး​”၊​ “ဂျူး​” စသည်ြဖင့်​ေပါ့​ေလ။ ထိုြမန်မာစာ​ေရး​ဆရာ၊​ ဆရာမြကီး​ေတွရဲ့​ စာ​ေပ​ေတွကို​ေရာ သူတို့​ေတွ တပုဒ်ြဖစ်​ေစ၊​ တစ်အုပ်ြဖစ်​ေစ​ေသာ်မှ ြမည်း​စမ်း​ြကည့်​ြဖစ်ြကပါ့​မလား​။ သိပ်ကိုြမန်မာဆန်ြပီး​ သိပ်ချစ်စရာ​ေကာင်း​တဲ့​ “​ေဇာ်ဂျီ”၊​ “မင်း​သုဝဏ်”၊​ “တင်မိုး​”၊​ “နုယဉ်”၊​ “​ေငွတာရီ”တို့​ရဲ့​ ကဗျာ​ေတွကို​ေရာ တစ်​ေြကာင်း​ြဖစ်​ေစ၊​ တစ်ပိုဒ်ြဖစ်​ေစ သူတို့​ ရွတ်ဆိုြကည့်​ြကပါ့​မလား​။
အဲဒီလို အဲဒီလိုနဲ့​ ကျွန်မဟာ အ​ေတွး​ေတွ နယ်ချဲ့​ြပီး​ ပူပင်​ေသာက စိုး​ရိမ်ဗျာပါဒ​ေတွ ြကီး​စွာနဲ့​ စဉ်း​စား​ေတွး​ေတာြပီး​သကာလမှာ ဆံုး​ြဖတ်ချက်တစ်ခုကို ချလိုက်ပါတယ်။ “ဟုတ်ြပီ… သူတို့​ေလး​ေတွ ြမန်မာြပည်၊​ ြမန်မာ့​ေြမ၊​ ြမန်မာ့​ေရ၊​ ြမန်မာ့​စာ​ေပကို ချစ်ြမတ်နိုး​တတ်၊​ စိတ်ဝင်စား​တတ်လာ​ေအာင် ဒီလိုလုပ်​ေပး​ခွင့်​ေလး​ရ​ေနတုန်း​မှာ ငါလုပ်​ေပး​နိုင်သ​ေရွ့​ေလး​ ကိုယ်စွမ်း​ဉာဏ်စွမ်း​ ရှိသ​ေလာက် အား​ထုတ်ြပီး​ သူတို့​ကို စည်း​ရံုး​ရမယ်” ဆိုြပီး​ ခါချဉ်​ေကာင်မာန်ြကီး​ ​ေတာင်ြကီး​ြဖိုမယ့်​ဟန်နဲ့​ အား​ြကိုး​မာန်တက်နဲ့​ သင်ြကား​ေရး​ကို စတင်လိုက်တဲ့​ကျွန်မဟာ အ​ေပါ်က​ေမး​ခွန်း​မျိုး​ေလာက်နဲ့​တင် ​ေချွး​ြပန်သွား​ခဲ့​ပါတယ်။ ြမန်မာစာဆိုတာ စိတ်ဝင်စား​စရာ​ေကာင်း​လှသလို သင်ယူဖို့​ခက်ခဲနက်နဲတဲ့​ စာလို့​လဲ ခံစား​မိလာပါတယ်။ တဆက်တည်း​မှာပဲ ကိုယ့်​ကို ကြကီး​၊​ ခ​ေခွး​ ဝိုင်း​ေအာင်​ေရး​တတ်ဖို့​ သင်​ေပး​ခဲ့​တဲ့​ ငယ်ငယ်တုန်း​ကဆရာ၊​ ဆရာမ​ေတွကိုလည်း​ သတိတရ ​ေကျး​ဇူး​တင်လိုက်မိပါရဲ့​။
တကယ်​ေတာ့​ ကျွန်မဆိုတာက ဒီနိုင်ငံမှာ အလုပ်လုပ်​ေနတုန်း​အချိန်မှာ ကျွန်မရထား​တဲ့​ ကိုယ်ပိုင်အချိန်​ေလး​ြဖစ်တဲ့​ စ​ေန၊​ တနဂင်္​ေနွရံုး​ပိတ်ရက် (၂)ရက်ထဲက​ေန အချိန်​ေလး​ နဲနဲဖဲ့​ြပီး​ ပရဟိတ အလုပ်​ေလး​ တစ်ခုခု လုပ်​ေပး​ချင်တဲ့​ စိတ်​ေြကာင့်​ရယ်၊​ က​ေလး​ေတွကို ချစ်တာ၊​ က​ေလး​ေတွကို စာသင်​ေပး​ရတာကို ဝါသနာပါတာက တစ်​ေြကာင်း​ရယ်​ေြကာင့်​သာ လုပ်အား​ေပး​ဆရာမအြဖစ် ဝင်လုပ်ခဲ့​တဲ့​သူ​ေလ။ ြပီး​ေတာ့​ ကျွန်မတို့​ေတွတုန်း​က ြမန်မာစာကိုလည်း​ (၁၀)တန်း​ အထိပဲ သင်ယူခဲ့​ရတာ ဆို​ေတာ့​ ​ေနာက်ပိုင်း​မှာလည်း​ ြမန်မာစာနဲ့​ ပတ်သက်လို့​ နှိုက်နှိုက်ချွတ်ချွတ် ထဲထဲဝင်ဝင် နက်နက်နဲနဲ ဆက်မ​ေလ့​လာြဖစ်ခဲ့​ဘူး​ပဲ ဆိုပါ​ေတာ့​။ အဲဒီမှာပဲ က​ေလး​ေတွကို သင်ပုန်း​ြကီး​ဖတ်စာ သင်​ေပး​ဖို့​ြကိုး​စား​တဲ့​အခါ အဲဒီလိုအခက်အခဲ​ေတွနဲ့​ စ​ေတွ့​တာပါပဲ။ ကျွန်မြကံု​ေတွ့​ရတာက အ​ေပါ်က​ေမး​ခွန်း​တင်ပဲလား​ဆို​ေတာ့​ မဟုတ်​ေသး​ဘူး​။ ရှိ​ေသး​တယ်။
တစ်ခါ​ေပါ့​….. “ြကွ” ဆိုတဲ့​ စာလံုး​ကို သင်တဲ့​အခါ ကျွန်မက အဲဒီ “ြကွ” ဆိုတဲ့​ စကား​လံုး​က ဘုရား​၊​ ရဟန်း​ သံဃာ အစရှိတဲ့​သူ​ေတွအတွက် သံုး​တဲ့​စကား​လံုး​ ြဖစ်​ေြကာင်း​၊​ ဥပမာဆိုရင်……ဘုရား​ရှင် လာတယ်လို့​ မသံုး​ဘူး​…“ြမတ်စွာဘုရား​ ြကွလာတယ်…” “ဆရာ​ေတာ်ြကီး​ေတွ၊​ ဘုန်း​ဘုန်း​ြကီး​ေတွ ြကွလာတယ်….” အဲဒီလို စာ​ေြကာင်း​မျိုး​ေတွမှာဆိုရင် ဒီ “ြကွ” ကို သံုး​ရတယ် လို့​ ရှင်း​ြပထား​မိပါတယ်။ ဒီလိုနဲ့​
​ေြမွထိက ​ေဆး​ခန်း​ သွား​ရမည်။
ဆိုတဲ့​ ဖတ်စာလည်း​ ​ေရာက်​ေရာ
“ဆရာမ…ဆရာမ ​ေြပာ​ေတာ့​ ြကွကို ဘုရား​တို့​၊​ ဘုန်း​ဘုန်း​ြကီး​တို့​ အတွက်ပဲ သံုး​တာဆို…အခု ဘာလို့​ ဆရာဝန်ကို ြကွလာြပီလို့​ သံုး​တာလဲ…” တဲ့​ေလ။ ကျွန်မ ငယ်ငယ်တုန်း​က သူတို့​လို စဉ်း​စား​မိရဲ့​လား​လို့​ ​ေတွး​ြကည့်​မိတယ်။ ဆရာမက ဒါဆို ဒါပဲလို့​ မှတ်လိုက်တာ များ​သလား​လို့​ေလ။
သူတို့​ေလး​ေတွရဲ့​ ြကံြကံဖန်ဖန်စဉ်း​စား​တတ်တဲ့​ ဉာဏ်ရည်​ေလး​ေတွကို​ေတာ့​ ကျွန်မ မချီး​ကျူး​ပဲ မ​ေနနိုင်ပါဘူး​။ တစ်ခါကဆိုရင်လည်း​
“ဆရာမ…. ကန်​ေတာ့​ ဆိုတဲ့​ စကား​လံုး​မှာ ​ေတာ့​ဆိုတာပါလို့​ ​ေတာ်​ေသး​တယ်​ေနာ်…. တကယ်လို့​ ​ေတာ့​ဆိုတဲ့​ စကား​လံုး​သာ မပါရင် အဘိုး​အိုကို ကန်ပါ လို့​ ြဖစ်သွား​မှာ​ေပါ့​ေနာ်….” တဲ့​။
အဲဒီလို ​ေပါက်​ေပါက်ရှာရှာ​ေလး​ေတွကလည်း​ ​ေတွး​တတ်​ေသး​တာပါ။ တစ်​ေန့​ တစ်​ေန့​ ဆရာမ​ေတွခမျာမှာလည်း​ သင်ခန်း​စာ​ေတွထဲက အ​ေြကာင်း​အရာ​ေတွကို သူတို့​မျက်စိထဲမှာ ပံု​ေပါ်လာ​ေအာင် သူတို့​နား​လည်​ေအာင် ဥပမာ၊​ ဥပ​ေမယျ​ေတွနဲ့​ ရှင်း​ရတာလည်း​ လွယ်​ေတာ့​မလွယ်လှပါဘူး​။ သူတို့​စိတ်ဝင်စား​ေအာင် ​ေြပာပံုဆိုပံု ဟန်ပန်မူရာကလည်း​ လို​ေသး​တယ်ထင်ပ။ ကျွန်မဆိုရင် ဘယ်​ေလာက်အထိ အ​ေြပာအ​ေဟာ စည်း​ရံုအား​ေကာင်း​သလဲဆိုတာ နမူနာ တစ်ခု ​ေြပာြပရရင်
တဲက​ေလး​ မိုး​ယို ​ေနသလား​။
ဆိုတဲ့​ ဖတ်စာကို သင်​ေတာ့​ “ဆရာမ မိုး​ယိုတယ်ဆိုတာ ဘာလဲ” တဲ့​။ ကျွန်မကလည်း​ ဒီလိုစိတ်ဝင်တစား​ေမး​လာတဲ့​အခါ အ​ေြဖကို ​ေပး​ဖို့​ အား​ကျိုး​မာန်တက်နဲ့​ေပါ့​
“သမီး​ေလး​ေရ မိုး​ယိုတယ်ဆိုတာ တဲ​ေပါ်က မိုး​ထား​တဲ့​အမိုး​က မလံုပဲ ​ေပါက်ြပဲ​ေနတဲ့​ အတွက် မိုး​ေရ​ေတွက အဲဒီအ​ေပါက်အြပဲ​ေတွကတဆင့်​ ယိုကျတာကို ​ေခါ်တာ​ေလ။ ဘာလို့​ အမိုး​ေတွက ​ေပါက်ြပဲရတာလဲဆို​ေတာ့​ ဒီတဲ​ေလး​ရဲ့​ အမိုး​က ကွန်ကရစ်​ေတွနဲ့​ ​ေဆာက်လုပ််ထား​တာမျိုး​ မဟုတ်ဘူး​ေလ။ ယာထဲမှာ ခဏ​ေနဖို့​အတွက် သက်ကယ်ပျစ်​ေတွနဲ့​မိုး​ထား​တာ။ သက်ကယ်ဆိုတာက ဘယ်ကရတာ…ဘယ်လို ပံုစံရှိတာ.....” စသည်ြဖင့်​ေပါ့​ေလ… ဟန်အြပည့်​ မာန်အြပည့်​နဲ့​ ရှင်း​ြပလိုက်တာ​ေပါ့​။
က​ေလး​ကလည်း​ ကျွန်မကို ြပူး​ြပူး​ေလး​နဲ့​ ြငိမ်ြပီး​ စိုက်ြကည့်​ေနတာဆို​ေတာ ကျွန်မကလည်း​ ငါ​ေတာ့​ ဟန်ကျြပီ​ေပါ့​ က​ေလး​က ငါ​ေြပာတာကို စိ်တ်ဝင်တစား​နား​ေထာင်​ေနရှာသား​ ဆိုြပီး​ ပီတိ​ေတွြဖစ်မယ်ြကံရံု ရှိ​ေသး​ ကျွန်မ စကား​မဆံုး​ခင်မှာပဲ က​ေလး​က ​ေြပာချလိုက်တာက “ဆရာမ ဆရာမ ြပီး​ခဲ့​တဲ့​ တစ်ပတ်က​ေလ သမီး​ေမ​ေမ i-phone ဝယ်လိုက်တယ် သိလား​…” တဲ့​ေလ။ “​ေဩာ်….​ေအး​ေအး​….” ကျွန်မမှာ ​ေရှ့​ဆက်ြပီး​ေတာ့​ပဲ ရှင်း​ြပရ​ေတာ့​မလို ရပ်လိုက်ရ​ေတာ့​မလိုနဲ့​ေလ။
ဒီလိုနဲ့​ တစတစဆိုသလို ကျွန်မရဲ့​ ​ေတာင်ြကီး​ြဖိုမယ့်​ မာန်​ေတွလည်း​ တြဖည်း​ြဖည်း​ တြဖည်း​ြဖည်း​နဲ့​ ​ေလျာ့​ကျကုန်ရြပီး​ ကဲပါ​ေလ…. ဘာမှမတတ်တာ၊​ မသိတာထက်စာရင် ကြကီး​က​ေန အအထိပဲ တတ်ဦး​ေတာ့​၊​ ဘယ်လိုအခက်အခဲ​ေတွပဲ ြကံု​ေတွရ​ေစဦး​ အနဲဆံုး​ သင်ပုန်း​ြကီး​ဖတ်စာ​ေလာက်ကိုပဲ သူတို့​ေလး​ေတွ ​ေကျ​ေကျညက်ညက် ဖတ်တတ်​ေအာင် သင်​ေပး​နိုင်ြပီဆိုရင်ကိုပဲ ​ေတာ်လှပါြပီ​ေလ ဆိုြပီး​ ကျွန်မရဲ့​ ရှိသမျှမာန်​ေတွကို ​ေလျှာ့​ချလိုက်ရပါ​ေလ​ေတာ့​တယ်။
ခါချဉ်​ေကာင်မာန်မြကီး​ ​ေတာင်ြကီး​မြဖို​ေတာ့​ပါ( http://ingjinthant.blogspot.com)(မအင်ြကင်း​သန့်​) မှ ကူး​ယူ​ေဖာ်ြပပါသည်။
အမျိုးအစား (သု​တ), ြမန်​မာ​စာ​​ြမန်​မာ​စ​ကား
ႏိုင္ငံျခားေမြး/ၾကီး ျမန္မာကေလးေတြမွမဟုတ္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ စာသင္ေနၾကတဲ့ကေလးေတြေတာင္ ျမန္မာမႈ ျမန္မာဟန္ ျမန္မာစာေပေတြကို သိပ္မသိ၊ မေလ့လာ မလိုက္စားၾကေတာ့ပါဘူး။ အဓိကကေတာ့ ဂလိုဘယ္လိုက္ေဇးရွင္း ေခၚ ေရစီးၾကီးရဲ႕ တိုက္စားမႈနဲ႔ ျမန္မာ့ပညာေရးစနစ္ၾကီးတစ္ခုလုံးရဲ႕ ယိုယြင္းပ်က္စီး ျခစားမႈဆိုတဲ့ အေၾကာင္းႏွစ္ရပ္ေၾကာင့္ပါ။ ကိုယ့္ပညာေရးစနစ္က ေကာင္းေနရင္ေတာင္မွ ဂလိုဘယ္လိုက္ေဇးရွင္းကို ခုခံဖို႔ အေတာ္ခက္ေနရာမွာ ပညာေရးကပါ ခ်ာသြားေတာ့ ျပီးေရာေပါ့
ကိုေဇာင္း- အလုပ္ေတြ အမ်ားႀကီး လုပ္ေနတာကို ေလးစားပါတယ္ဗ်ာ။ နိဳင္ငံရပ္ျခားေရာက္ ျမန္မာကေလးေတြနဲ႔ မသိေသးတဲ႔ လူႀကီးေတြပါ ဗဟုသုတရေစပါတယ္။အရမ္းေကာင္းမြန္တဲ႔ အစီအစဥ္ေတြပါ။
ြကိုဆိုပါ၏ သံတူထပ်ဆင့် စံုတွဲစကားလံုးများ